Hetsiky ny mpitondra fivavahana : Ambodia mitafy hodi-janak’ondry ! -
AccueilRaharaham-pirenenaHetsiky ny mpitondra fivavahana : Ambodia mitafy hodi-janak’ondry !
16/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mazava tsara ny voalazan’ny lalàm-panorenana fa fanjakana laika no misy eto amintsika, izany hoe fitantanan-draharaham-panjakana tsy hidiran’ny resaka fivavahana. Maro ireo fiangonana no manaja izany, ary tsy mitsabaka amin’ny resaka politika toy ny ataon’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana ireto. Ny anjaran’ny mpitondra fivavahana dia mipetraka ho raiamandreny toy ny ataon’ny Ffkm, ka sanatriaviny mandifitra olona mihitsy raha hiditra amina fanambarana politika tahaka ny nataon’ireo mpitandrina vitsivitsy mivondrona ao anatin’ilay « Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana ». Ny mpanao politika no manao fanambarana politika sy mitsikera. Ny mpitondra fivavahana kosa dia manabe ny mpiangona ao aminy.
Tsy tahotra tsy henatra fa dia namoaka fanambarana politika ranofotsiny izy ireo tamin’ity herinandro ity tetsy amin’ny Motel Anosy. Hijoro hitarika ny vahoaka izahay, hoy izy, mba hampahafantatra ny zony izay voahitsakitsaka, ka izahay no ho mpitarika azy, raha ny tenin’ny mpitandrina Randriamisata Roger tamin’io valandresaka nataony ho an’ny gazetin’ny mpanohitra io. Marihina fa dia ny gazetin’ny mpomba an-dRavalomanana moa no tena nantsoiny tamin’izany.
Mazava be tokoa izany, satria efa saribakolin-dRavalomanana Marc ny Hmf tamin’ireny raharaha 2009 sy ny 2010 ireny. Lehibe indrindra tamin’ireny ny zava-nitranga teny amin’ny Fign nyvolana mey 2010, izay nisian’ny savorovoro lehibe ka nandraisan’ireto Hmf ( Hetsiky ny Mpitondra fivavahana ireto tamin’izany) . Amboadia mitafy hodi-janak’ondry ry Hmf ireto. Mody hoe hetsiky ny mpivavaka kanefa mpitondra tenin-dRavalomanana Marc, ary tsy miafina mihitsy. Hanongam-panjakana izany ny Hmf amin’io fanambarana izay nataony io? Jereo izany izy hoe “hijoro ho mpitarika ny vahoaka mihitsy”? Afa- miafina ao ambadiky ny hetsiky ny mpivavaka rehefa te hanao politika, fa izay ilay fanaovana politika mamohehitra eto amintsika. Fitahiana ao ambadiky ny fivavahana ny olona, kanefa ny tanjona dia hamita ny irak’i Ravalomanana. Dia hitazam-potsiny an’itony amboadia mitafy hodi-janak’ondry itony ve ny filohan’ny Fjkm?